မြန်မာနိုင်ငံရှိ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ - ဝီကီပီးဒီးယား
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ
ကချင်ပြည်နယ်၊ လိုင်ဇာမြို့ရှိ ဌာနချုပ်တွင် လေ့ကျင့်မှုများ ပြုလုပ်နေသော ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (KIA) တပ်ဖွဲ့ဝင်များ
ဤသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ စာရင်း (တပ်မတော်မှ လွဲ၍) ဖြစ်သည်။
၁ တိုက်ပွဲဝင်နေဆဲ အဖွဲ့များ
၂ အပစ်အခတ်ရပ်စဲထားသော အဖွဲ့များ
၃ ဖျက်သိမ်းပြီးသော အဖွဲ့များ
၄ စစ်ဖက် ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့များ
ရက္ခိုင့်တပ်တော် အေအေ ၂၀၀၉ ၇၀,၀၀၀ - ၁၀၀,၀၀၀ လိုင်ဇာမြို့ ၊ မြောက်ဦးမြို့ ကချင်ပြည်နယ်၊
အိန္ဒိယ-မြန်မာ နယ်စပ် မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
ဖိုင်:Arakan State Army Flag.png ရခိုင်ပြည်တပ်မတော် အေအေ ၂၀၁၀ 7002100000000000000♠ ၁၀၀–၃၅၀+[ကိုးကားချက်လိုသည်] ရွေ့လျားဌာနချုပ် ကချင်ပြည်နယ် ရခိုင်အမျိုးသားကောင်စီ၏ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့
အာရကန်ရိုဟင်ဂျာ ကယ်တင်ရေးတပ်မတော် အေအာရ်အက်စ်အေ ၂၀၁၃ 7002200000000000000♠ ~၂၀၀ ရွေ့လျားဌာနချုပ် ရခိုင်ပြည်နယ်၊
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်–မြန်မာ နယ်စပ် ၂၀၁၆ နှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်တလျောက်ရှိ မြန်မာကင်းစခန်းများအား တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းအတွက် တာဝန်ရှိသည့် အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ယခင်က Harakah al-Yaqin ဟု သိကြသည်။
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် ကေအိုင်အေ ၁၉၆၁ 7004100000000000000♠ ၁၀,၀၀၀–၁၂,၀၀၀ လိုင်ဇာမြို့၊
Pajau (၂၀၀၅ အထိ) ကချင်ပြည်နယ် ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့၏ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC) အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်သည်။ Holds and governs territory in Kachin State.
ကူကီးအမျိုးသားတပ်မတော် KNA(B) ၁၉၈၈ 7002200000000000000♠ ၂၀၀+ ရွေ့လျားဌာနချုပ် ချင်းပြည်နယ်၊
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကူကီးအမျိုးသားအစည်းအရုံး၏ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့
မြန်မာအမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA ၁၉၈၉ 7003200000000000000♠ ၂,၀၀၀–၄,၀၀၀ ရွေ့လျားဌာနချုပ် ရှမ်းပြည်နယ် ကိုးကန့်ဒီမိုကရေစီပါတီ၏ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်သည်။ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ပြိုကွဲပြီးနောက် ခွဲထွက်လာသည့် အဖွဲ့ဖြစ်သည်။
ရှမ်းနီအမျိုးသားများတပ်မတော် SNA ၂၀၁၆ 7002300000000000000♠ ၃၀၀[ကိုးကားချက်လိုသည်] ရွေ့လျားဌာနချုပ် ကချင်ပြည်နယ် ရှမ်းပြည်တပ်မတော်-တောင်ပိုင်း နှင့် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ တို့နှင့် မဟာမိတ် ဖြစ်သည်။
တအောင်း အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် TNLA ၁၉၉၂ 7003150000000000000♠ ၁,၅၀၀–၃,၅၀၀ ရွေ့လျားဌာနချုပ် ရှမ်းပြည်နယ် ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC)  နှင့် မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တို့၏ အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်သည်။ ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ကို အုပ်ချုပ်နေသည်။
ဇိုမီးတော်လှန်ရေးတပ်မတော် ZRA ၁၉၉၇ 7003300000000000000♠ ၃,၀၀၀ Churachandpur ချင်းပြည်နယ်၊
အိန္ဒိယ–မြန်မာ နယ်စပ် ဇိုမီးတော်လှန်ရေးအဖွဲ့၏ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင်း အသေးစားထိတွေ့တိုက်ခိုက်မှုများသာ ရှိသည်။
ကယန်းပြည်သစ်တပ်မတော် KNLA ၁၉၆၄ ၁၀၀၀၀ ဆီးဘူး၊ ရှမ်းတောင် ရှမ်း၊ကယား ကယန်း
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ် ၁၉၈၈ ၂၀၁၅ 7002600000000000000♠ ၆၀၀–၁,၀၀၀ မာနယ်ပလော (၁၉၉၅ မတိုင်မီ) မြန်မာ–ထိုင်း နယ်စပ်၊
ရခိုင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် ALA ၁၉၆၈ ၂၀၁၂၊ ၂၀၁၅ 7001600000000000000♠ ၆၀–၁၀၀ စစ်တွေမြို့ ကရင်ပြည်နယ်၊
ရခိုင်ပြည်နယ် ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံးနှင့် မဟာမိတ် ဖြစ်သည်။
ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ၁၉၈၈ ၂၀၁၂၊ ၂၀၁၅ 7002200000000000000♠ ၂၀၀+ ဟားခါးမြို့ ချင်းပြည်နယ် ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး၏ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC) အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။
ဒီမိုကရက်တစ် ကရင်အကျိုးပြုတပ်မတော် - တပ်မဟာ ၅ DKBA-5 ၂၀၁၀ ၂၀၁၁ 7003150000000000000♠ ၁,၅၀၀+ ဆုံဆည်းမြိုင် မြဝတီမြို့နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ် ၂၀၁၀ ခုနှစ်အထိ ဒီမိုကရက်တစ် တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်တပ်မတော် တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်း KNDO ၁၉၄၉ ၂၀၁၂၊ ၂၀၁၅ မသိရှိရ လေဝါး၊
မာနယ်ပလော (၁၉၉၅ အထိ) ကယားပြည်နယ်၊
ကရင်ပြည်နယ် ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံး
ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် KNLA ၁၉၄၉ ၂၀၁၂၊ ၂၀၁၅ 7003500000000000000♠ ၅,၀၀၀–၇,၀၀၀ လေဝါး၊
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံး၏ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC) အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။
ကရင်နီ တပ်မတော် KA/KNPP ၁၉၄၉ ၂၀၀၅၊ ၂၀၁၂ 7002500000000000000♠ ၅၀၀–၁,၅၀၀ ညမိုး ကယားပြည်နယ် ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ၏ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC) အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။
ကေအဲန်ယူ/ကေအဲန်အယ်အေ ငြိမ်းချမ်းရေး ကောင်စီ ကေပီစီ ၂၀၀၇ ၂၀၁၅ 7002200000000000000♠ <၂၀၀ Tokawko ကယားပြည်နယ် ကေအဲန်ယူ၊ ကေအဲန်အယ်အေ တို့နှင့် ဆက်နွယ်မှု မရှိပေ။
မွန်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် MNLA ၁၉၅၈ ၁၉၉၅၊ ၂၀၁၂ 7002800000000000000♠ ၈၀၀+ (အရံအင်အား ၂,၀၀၀–၅,၀၀၀) ရဲချောင်းဖျား မွန်ပြည်နယ်၊
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၏ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့
အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်တပ်မတော် NDAA-ESS ၁၉၈၉ ၁၉၈၉၊ ၂၀၁၁ 7003300000000000000♠ ၃,၀၀၀–၄,၀၀၀ မိုင်းလားမြို့ ရှမ်းပြည်နယ် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ပြိုကွဲပြီးနောက် ခွဲထွက်လာသည့် အဖွဲ့ဖြစ်သည်။
နာဂအမျိုးသားဆိုရှယ်လစ်ကောင်စီ NSCN-K ၁၉၈၀ ၂၀၁၂ 7002500000000000000♠ <၅၀၀ ရွေ့လျားဌာနချုပ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနှင့် တိုက်ခိုက်မှု မရှိတော့ပေ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် မြန်မာအစိုးရနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သော်လည်း အိန္ဒိယနှင့် ပဋိပက္ခဖြစ်နေဆဲ ဖြစ်သည်။
ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA ၂၀၀၉ ၂၀၁၂ 7002400000000000000♠ ၄၀၀+ လေဘွားစခန်း ရှမ်းပြည်နယ်၊
မြန်မာ–ထိုင်း နယ်စပ် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်၏ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့
ရှမ်းပြည်တပ်မတော်-မြောက်ပိုင်း SSA-N ၁၉၇၁ ၁၉၈၉၊ ၂၀၁၂ 7003800000000000000♠ ၈,၀၀၀ ဝမ်ဟိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ၏ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ ဖြစ်ပြီး ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC) အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။
ရှမ်းပြည်တပ်မတော်-တောင်ပိုင်း SSA-S ၁၉၉၆ ၂၀၁၂၊ ၂၀၁၅ 7003600000000000000♠ ၆,၀၀၀–၈,၀၀၀ လွယ်တိုင်းလျှံ ရှမ်းပြည်နယ်၊
မြန်မာ–ထိုင်း နယ်စပ် သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ ၏ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ရှမ်းပြည်ကွန်ဂရက် အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်သည်။ မွန်ထိုင်းတပ်မှ ၁၉၉၅ တွင် ခွဲထွက်ခဲ့သည်။
ဝပြည် သွေးစည်းညီညွတ်ရေး တပ်မတော် UWSA ၁၉၈၉ ၁၉၈၉၊ ၂၀၁၁ 7004200000000000000♠ ၂၀,၀၀၀–၂၅,၀၀၀ ပန်ဆန်းမြို့ ရှမ်းပြည်နယ် ဝ ပြည်နယ်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ၏ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ ဖြစ်သည်။ ဝကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း (ဝပြည်နယ်) ကို လက်ရှိ အုပ်ချုပ်နေသည်။
ဖိုင်:Flag of Wa.svg ဝအမျိုးသားတပ်မတော် WNA ၁၉၆၉ ၁၉၉၇ 7002200000000000000♠ ၂၀၀ ဟိုမိန်းမြို့ ရှမ်းပြည်နယ် ဝအမျိုးသားအစည်းအရုံး၏ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ ဖြစ်ပြီး ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC) အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် အစိုးရနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
Arakan Rohingya Islamic Front ARIF ၁၉၈၆ ၁၉၉၈ မသိရှိရ ရွေ့လျားဌာနချုပ် ရခိုင်ပြည်နယ်၊
ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ CPB ၁၉၃၉ ၁၉၈၉ 7003600000000000000♠ ၆,၀၀၀ ပန်ဆန်းမြို့ ရှမ်းပြည်နယ် ၁၉၈၈ တွင် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။
ဒီမိုကရက်တစ် တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်တပ်မတော် ဒီကေဘီအေ ၁၉၉၄ ၂၀၁၀ 7003500000000000000♠ <၅,၀၀၀ မာနယ်ပလော (၁၉၉၅ အထိ) ကရင်ပြည်နယ် ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းပြီး မကြာမီ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံးမှ ခွဲထွက်လာခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ တွင် ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်တပ်မတော် 1997 2006 7002500000000000000♠ 500 ရွေ့လျားဌာနချုပ် မြန်မာ–ထိုင်းနယ်စပ် ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် အစိုးရတပ်များထံ လက်နက်ချခဲ့သည်။
ကချင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ ကေဒီအေ ၁၉၆၁ ၂၀၁၀ 7003150000000000000♠ ၁,၅၀၀ ကောင်းခါးရွာ ရှမ်းပြည်နယ် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်၏ တပ်မဟာ ၄ အဖြစ် စတင်ခဲ့သည်။
ကရင်နီလူမျိုးပေါင်းစုံ ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး KNPLF ၁၉၇၈ ၂၀၀၉ 7003400000000000000♠ ၄,၀၀၀ ရွေ့လျားဌာနချုပ် ကယားပြည်နယ် ကရင်နီ တပ်မတော်မှ ခွဲထွက်လာခဲ့သည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့အဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
မုန်းကိုးကာကွယ်ရေးတပ် MRDA ၁၉၉၅ ၂၀၀၀ မသိရှိရ မုန်းကိုးမြို့ ရှမ်းပြည်နယ်၊
တရုတ်–မြန်မာ နယ်စပ် မြန်မာအမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်တပ်မတော်မှ ခွဲထွက်ခဲ့သည်။
မုန်းတိုင်းတပ် MTA ၁၉၈၅ ၁၉၉၆ 7004200000000000000♠ ၂၀,၀၀၀ ဟိုမိန်းမြို့ ရှမ်းပြည်နယ်၊
မြန်မာ–ထိုင်း နယ်စပ် ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် အစိုးရတပ်များထံ လက်နက်ချခဲ့သည်။
မွန်ပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတပ် MRA ၂၀၀၁ ၂၀၁၂ 7002100000000000000♠ ၁၀၀–၃၀၀ Sangkhlaburi မွန်ပြည်နယ်၊
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ဟံသာဝတီပြန်လည်ထူထောင်ရေးပါတီ၏ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် အစိုးရတပ်များထံ လက်နက်ချခဲ့သည်။
မူဂျာဟစ် မရှိ ၁၉၄၇ ၁၉၆၁ 7003200000000000000♠ ၂,၀၀၀ မေယု ရခိုင်ပြည်နယ် ၁၉၅၀ ဆယ်စုနှစ်နှောင်းပိုင်းနှင့် ၁၉၆၀ ဆယ်စုနှစ်အစောပိုင်းတို့တွင် အစိုးရတပ်များထံ လက်နက်ချခဲ့သည်။
ကချင်ဒီမိုကရေစီသစ် တပ်မတော် NDA-K ၁၉၈၉ ၂၀၀၉ 7002700000000000000♠ ၇၀၀ ပန်ဝါ ရှမ်းပြည်နယ် ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့အဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
ပအိုဝ်းအမျိုးသားတပ်မတော် PNA ၁၉၄၉ ၁၉၉၁ မသိရှိရ တောင်ကြီးမြို့ ရှမ်းပြည်နယ် ပအိုဝ်း အမျိုးသား အဖွဲ့ချုပ်၏ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် ဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေးပါတီ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကို အုပ်ချုပ်နေသည်။
အလံနီ ကွန်မြူနစ်ပါတီ RFCP ၁၉၄၈ ၁၉၇၈ 7002500000000000000♠ ၅၀၀ ရွေ့လျားဌာနချုပ် ရှမ်းပြည်နယ် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (အလံဖြူများ) ထံမှ ခွဲထွက်လာခဲ့သည်။
Rohingya Liberation Party RLP ၁၉၇၂ ၁၉၇၄ 7002800000000000000♠ ၈၀၀–၂,၅၀၀ ရွေ့လျားဌာနချုပ် ရခိုင်ပြည်နယ် ၁၉၇၄ ဇူလိုင်လတွင် အစိုးရစစ်တပ်၏ ထိုးစစ်ဆင်မှုကြောင့် သောင်းကျန်းသူများ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဖက်သို့ ထွက်ပြေးသွားကြသည်။
Rohingya National Army RNA ၁၉၉၈ ၂၀၀၁ မသိရှိရ ကောက်ဘဇာခရိုင် ရခိုင်ပြည်နယ်၊
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်–မြန်မာ နယ်စပ် Arakan Rohingya National Organisation (ARNO) ၏ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့
Rohingya Patriotic Front RPF ၁၉၇၄ ၁၉၈၀ ဆယ်စုနှစ် 7001700000000000000♠ ၇၀ ရွေ့လျားဌာနချုပ် ရခိုင်ပြည်နယ်
Rohingya Solidarity Organisation RSO ၁၉၈၂ ၁၉၉၈ မသိရှိရ ရခိုင်ပြည်နယ်၊
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်–မြန်မာ နယ်စပ် တာလီဘန်နှင့် အယ်လ်ကေးဒါး တို့နှင့် ဆက်သွယ်မှုရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ ၁၉၉၀ ဆယ်စုနှစ်များတွင် လှုပ်ရှားခဲ့ပြီး ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှု မရှိတော့ပေ။
ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSA ၁၉၆၄ ၁၉၇၆ 7003150000000000000♠ ၁,၅၀၀ ရွေ့လျားဌာနချုပ် ရှမ်းပြည်နယ် ရှမ်းပြည်တပ်မတော်-မြောက်ပိုင်း နှင့် ရှမ်းပြည်တပ်မတော်-တောင်ပိုင်း တို့၏ မူလဖြစ်သည်။ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကဲ့သို့သော အဖွဲ့များနှင့် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
ရှမ်းပြည် အမျိုးသား တပ်မတော် SSNA ၁၉၉၅ ၂၀၀၅ 7003800000000000000♠ ၈,၀၀၀ (အများဆုံး) သီပေါမြို့ ရှမ်းပြည်နယ် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ရှမ်းပြည်တပ်မတော်-တောင်ပိုင်း နှင့် ပေါင်းစည်းခဲ့သည်။
ရှမ်းပြည်နယ်တပ်ပေါင်းစုတော်လှန်ရေးတပ်မတော် SURA မသိရှိရ ၁၉၉၆ မသိရှိရ ဟိုမိန်းမြို့ ရှမ်းပြည်နယ်၊
မြန်မာ–ထိုင်း နယ်စပ် ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် အစိုးရတပ်များထံ အများစု လက်နက်ချခဲ့ကြသည်။ အင်အား ၈၀၀ ခန့်မှာ ရွက်ဆစ်၏ အုပ်ချုပ်မှုဖြင့် ရှမ်းပြည်တပ်မတော်-တောင်ပိုင်း ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
မြန်မာကျောင်းသား စစ်သည်တော်များအဖွဲ့ VBSW ၁၉၉၉ ၂၀၁၃ မသိရှိရ ရွေ့လျားဌာနချုပ် မြန်မာ–ထိုင်း နယ်စပ် ၂၀၁၃ နောက်ပိုင်းတွင် လှုပ်ရှားမှု မရှိတော့ပေ။ ၁၉၉၉ အောက်တိုဘာတွင် ဘန်ကောက်မြို့ရှိ မြန်မာသံရုံးကို ဝင်ရောက်စီးနင်းကာ ဓားစာခံများ ထိန်းသိမ်းခဲ့သဖြင့် နာမည်ဆိုးရခဲ့သည်။
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတပ်မတော် FUA ၂၀၁၁ ချင်းမိုင်မြို့
ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ၏ လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ ဖြစ်သည်။
မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ NA-B ၂၀၁၆ လိုင်ဇာမြို့
↑ AA (Karen Region) | Myanmar Peace Monitor (in en-gb)။ Myanmar Peace Monitor။ 29 April 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 March 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Myanmar military admits role in killing Rohingya found in mass grave"၊ CNN၊ 11 January 2018။ 16 January 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "'Beyond comprehension': Myanmar admits killing Rohingya"၊ www.aljazeera.com၊ 11 January 2018။ 16 January 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Islamist fears rise in Rohingya-linked violence"၊ Bangkok Post၊ Post Publishing PCL။5November 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kachin Independence Organization (KIO) | Myanmar Peace Monitor (in en-gb)။ Myanmar Peace Monitor။ 12 March 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၆.၀ ၆.၁ ၆.၂ ၆.၃ ၆.၄ ၆.၅ ၆.၆ Peace Process Overview | Myanmar Peace Monitor (in en-gb)။ Myanmar Peace Monitor။ 12 March 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Burma attack breaks Kachin truce near China border"၊ BBC၊ 20 January 2013။ 18 August 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ "The rebels are seeking greater autonomy within Burma for ethnic Kachins who have had de facto control overapart of northern Burma for more than 50 years."
↑ Kuki National Organization | Myanmar Peace Monitor (in en-gb)။ Myanmar Peace Monitor။ 15 October 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 23 February 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ MNDAA | Myanmar Peace Monitor (in en-gb)။ Myanmar Peace Monitor။ 12 March 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 47 Govt Troops Killed, Tens of Thousands Flee Heavy Fighting in Shan State။ irrawaddy.org။
↑ PSLF/TNLA | Myanmar Peace Monitor (in en-gb)။ Myanmar Peace Monitor။ 12 March 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "On Patrol With Myanmar Rebels Fighting Both the Army and Drug Addiction - VICE News" (in en-US)၊ VICE News၊ 23 April 2015။
↑ ၁၃.၀ ၁၃.၁ ၁၃.၂ ၁၃.၃ ၁၃.၄ ၁၃.၅ ၁၃.၆ Armed ethnic groups | Myanmar Peace Monitor (in en-gb)။ Myanmar Peace Monitor။ 12 March 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၄.၀ ၁၄.၁ ၁၄.၂ ၁၄.၃ ၁၄.၄ 15 October 2015။ Myanmar Signs Historic Cease-Fire Deal With Eight Ethnic Armies။ Radio Free Asia။3March 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ All Burma Students' Democratic Front (ABSDF) | Myanmar Peace Monitor (in en-gb)။ Myanmar Peace Monitor။ 12 March 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၆.၀ ၁၆.၁ ၁၆.၂ ၁၆.၃ ၁၆.၄ I. Rotberg၊ Robert (1998)။ Burma: Prospects foraDemocratic Future။ Brookings Institution Press။ ISBN 0815791690။
↑ ၁၇.၀ ၁၇.၁ ၁၇.၂ The Politics of Pressure: The 1990's and the Fall of Manerplaw။ The Museum of Karen History and Culture။ 19 April 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Arakan Liberation Party (ALP) | Myanmar Peace Monitor (in en-gb)။ Myanmar Peace Monitor။ 12 March 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Chin National Front (CNF) | Myanmar Peace Monitor (in en-gb)။ Myanmar Peace Monitor။ 12 March 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Peace may prove elusive as divisions sap strength of karen national union | Bangkok Post: news" (in en)၊ www.bangkokpost.com၊ Bangkok Post၊ 14 October 2012။ 10 March 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Asia Times - News and analysis from throughout Southeast Asia။ 27 February 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 July 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၂.၀ ၂၂.၁ ၂၂.၂ Burma center for Ethnic Studies, Jan. 2012, "Briefing Paper No. 1" http://www.burmalibrary.org/docs13/BCES-BP-01-ceasefires(en).pdf
↑ Murray၊ Lucy။ "Karenni rebels dig in for last stand"၊ Asia Times။ 19 July 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 10 May 2017။
↑ Karen Peace Council (KPC) | Myanmar Peace Monitor (in en-gb)။ Myanmar Peace Monitor။ 25 September 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 October 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ New Mon State Party (NMSP) | Myanmar Peace Monitor (in en-gb)။ Myanmar Peace Monitor။ 15 October 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NDAA | Myanmar Peace Monitor (in en-gb)။ Myanmar Peace Monitor။ 12 March 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NSCN-K | Myanmar Peace Monitor (in en-gb)။ Myanmar Peace Monitor။ 12 March 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "NSCN (K) camps busted along Indo-Myanmar border | The North East Today | Delivering news upto the minute"၊ thenortheasttoday.com၊9June 2015။ 18 July 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on4March 2016။
↑ PNLO | Myanmar Peace Monitor (in en-gb)။ Myanmar Peace Monitor။ 12 March 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Wa army fielding new Chinese artillery, ATGMs။ IHS Jane's Defence Weekly။ 23 July 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Luke Gerdes (8 February 2009)။ Constructing Terror: How Issues of Construct Validity Undermine the Utility of Terror Databases and Statistical Analyses of Terrorism။ All Academic Research။ 23 October 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 August 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “The best such example comes from the United Wa State Army (UWSA), an armed ethnic organisation that has established de facto control overaportion of Northeastern Burma.”
↑ Bangladesh Extremist Islamist Consolidation။ by Bertil Lintner။ 21 October 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Richard Michael Gibson (2011)။ The Secret Army: Chiang Kai-shek and the Drug Warlords of the Golden Triangle။ John Wiley and Sons။ p. 88။ ISBN 978-0-470-83018-5။
↑ Mydans၊ Seth။ "Burmese Rebel Chief More Boy Than Warrior"၊ 1 April 2000။2November 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Burmanet » Kachin News Group: KDA transformed to militia groups by Burma junta"၊ www.burmanet.org။ 22 January 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 27 January 2016။
↑ Karenni National People's Liberation Front။ 10 May 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 July 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Steinberg၊ David I. (2001)။ Burma: The State of Myanmar (အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်)။ Georgetown University Press။ p. 195။ ISBN 1589012852။ 10 March 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Colletta၊ Nat J.; Lim၊ Teck Ghee; Kelles-Viitanen၊ Anita (2001)။ Social Cohesion and Conflict Prevention in Asia: Managing Diversity Through Development (အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်)။ World Bank Publications။ p. 310။ ISBN 9780821348741။ 10 March 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Ceasefire celebration noticeably absent"၊ Independent Mon News Agency၊ 29 June 2010။2January 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Irrawaddi - Precarious Peace in Monland
↑ New Democratic Army - Kachin။ Mizzima News။ 23 October 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 July 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Schmid, Alex Peter, A.J. Jongman, and Michael Stohl. Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories, and Literature. New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, 2005. p. 514
↑ ၄၄.၀ ၄၄.၁ Pho Kan Kaung (May 1992)။ The Danger of Rohingya။ Myet Khin Thit Magazine No. 25။ pp. 87–103။
↑ Rohingya Solidarity Organization | Facebook။ 24 December 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Chronology for Shans in Burma
↑ Vigorous Burmese Student Warriors။ Tracking Terrorism။
↑ Stakeholders: UNFC | Myanmar Peace Monitor (in en-gb)။ Myanmar Peace Monitor။ 12 March 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Myanmar Peace Monitor – NGO based in Chaing Mai, Thailand that monitors Myanmar's ongoing peace process.
Pyidaungsu Institute – Political institute based in Chaing Mai, Thailand focused on achieving political stability and peace in Myanmar.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြန်မာနိုင်ငံရှိ_လက်နက်ကိုင်_အဖွဲ့အစည်းများ&oldid=703144" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၀၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။